ကိုယ်တွေ့လေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Ideas & Plans » ကိုယ်တွေ့လေး
Posted by snow white on Jul 18, 2012 in Ideas & Plans | 13 comments
သတ္တဝါတွေ လူစကားနည်းလည်တယ် ဆိုတာ ကြားတော့ကြားဖူးတယ် မြင်လည်းမြင်ဖူးတယ်တွေ့လည်းတွေ့ဖူးပါတယ်
ခွေးဆိုတဲ့သတ္တဝါဆို လူဘာပြောလိုက်တယ်ဆိုတာ ခွေးတွေကတန်းသိတယ် ခိုင်းတိုင်းလည်းရတဲ့ခွေးမျိုးတွေမြင်ဖူးတယ်
ကြောင်ဆိုရင်လည်း သူတို့ချီးကနံတဲ့အတွက် သူတို့ ကိုဘယ်နေရာမှာ အီးပါဆိုပြီး ပါခိုင်းမယ့်နေရာကြောင်တွေ ကို သွားပြထားတယ် သူတို့ ဖင်
နဲ့အီးပါမယ့်နေရာကိုစောင့်ပြလိုက်ရင် သူတို့ အိမ်သာတက်ချင်ရင် အဲ့နေရာမှာဘဲသွားပါတယ်ဆိုတာ မြင်ဖူးတယ် စနိုးတို့အိ်မ်မှာလည်း ကြောင်မွေးဖူးတော့
ကြောင်အကြောင်းတော့သိတယ် အိမ်ပူရင်တော့ ကြောင်ဆိုတဲ့သတ္တဝါမျိုးကပြေးပြီ
ခွေးကတော့ အိမ်တစ်အိမ်နာမကျန်းဖြစ်လို့ ခွေးရှိတဲ့အိမ်မျိုး မှာသေမယ့် မသာမျိုးတောင်မသေဘဲ ခွေးကတန်စာခံသေသွားသေးတယ် ဆိုတာတောင်ကြားဖူးပါတယ်
နောက်နီးစပ်ဆုံးသတ္တဝါကတော့ ကြွက် တို့ပိုးဟပ်တို့ ခြင်တို့ယင်ကောင် တို့ များကြီးဘဲ နီးစပ်သေးတယ်ပေါ့နော်
စနိုးပြောချင်တာကတော့ ကြွက်အကြောင်းပေါ့ ကြွက်တွေက သူတို့ တွေက လူတွေကိုရောဂါလည်းဖြစ်စေတယ်
သတ္တဝါတိုင်းတော့ နီးနီးစပ်စပ်နေပါများရင်အနည်းနဲ့အများတော့ ရောဂါရတက်ပါတယ် ကြွက် ကြောင့်ရတဲ့ရောဂါကလည်းများပါတယ်
ကြွက်တွေ ကိုက်တက်တယ် ပစ္စည်းတွေလည်းပျက်စီးစေတယ် သူတို့ကိုဆဲရင်လည်းသူတို့ ကနားလည်လားမလည်လားတော့ မသိဘူး
ဆဲတဲ့သူရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုခုဖျက်စီးတက်တယ်တဲ့ စနိုးတို့နားကအစ်မ လက်တွေ့ဖြစ်ဖူးတယ်လေ
အဲ့အစ်မ အိပ်ယာပေါ်မှာ ကြွက်ချီးကလည်း သူအိပ်ယာပေါ်မှာပါးသွားတယ် ကြွက်ချီးနံ့ကလည်းတအားနံတယ်နော် မြေကြွက် တွေဆို
ပိုဆိုးတယ် အဲ့အစ်မ ကကြွက်တွေကို ဆဲပါလေရောမသာကြွက်တွေ တအားဆိုးတယ် ငါ့အိပ်ယာမှာလည်း ချီးပါသွားတယ် မသာကြွက်တွေဘာညာနဲ့ပြောတာပေါ့လေ
နောက်နေ့မနက်လည်းကျရောအဲ့အစ်မအကြိုက်ဆုံးအကျီင်္ကိုမှ ကိုက်သွားတာနော် ကျန်တဲ့အကျီင်္များကြီးဘဲ တစ်ထည်မှ ဘာမှမဖြစ်ဘူး အဲ့အစ်မ
သူအကြိုက်ဆုံးအကျီင်္ကိုကိုက်သွားတာဆိုတော့လေ စနိုးအမေကပြောတယ် အဲ့အစ်မကို ကြွက်တွေကိုမဆဲရဘူးသူတို့ကိုဆဲရင် သူတို့ကပိုဆိုးတယ်တဲ့လေ။။
ခုစနိုးအဖြစ်လေးပြောပြမယ် စနိုးအလုပ်မှာက ကြွက်တော်တော်လေးပေါတယ် ကြွက်သတ်ဆေးနဲ့ ရုံးကအစ်ကိုတွေက သတ်ပေးလည်း ပိုတောင်ပေါလာ
သလိုခံစားရတယ် စနုးိကကြွက်လည်းကြောက်တက်တယ် ရင်ထဲမှာလည်းကြွက်သေမြင်ရင် ရင်ထဲမကောင်းဘူး ကြွက်တွေ့တာနဲ့ အော်တော့တာဘဲ
ကြောက်တက်တဲ့သူက ကြွက်နဲ့တူတူအလုုပ်လုပ်နေရသလိုပါဘဲ မနက်မိုးလင်းတာနဲ့ ကြွက်ချီးတွေက စနိုးခုံနားမှာပတ်ပတ်လည်လည်မှာမှများကြီးဘဲ
မနက်မိုးလင်းလာရင်ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စကနောက်မှ လုပ်ရတယ် ကြွက်ပါထားတဲ့ချီးကိုအရင်ရှင်းရတယ် တစ်ရက်လည်းမဟုတ်နှစ်ရက်လည်းမဟုတ်
စနိုးစိတ်ကတင်းလာတာနဲ့ မဆဲတော့မဆဲဘူး စနိုးကကြွက်တွေရေ ငါ့ကိုလည်းသနားပါအုံးမနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ နင်တို့အလုပ်ဘဲလုပ်နေရတယ်
နင်တို့ကိုဆဲတော့မဆဲဘူး နော် နင်တို့ကိုဖူးထားမယ်လို့ စနိုးအဲ့လိုမျိုးအော်လိုက်တယ် ပြီးတော့လည်း စနိုးအလုပ်ရုံးခန်းကမြေညီထပ်ဆိုတော့ ပိုဆိုးတယ် မြေကြွက်
ကြွင်းကြီးကနည်းတာမဟုတ်ဘူး စနိုးစိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ အဲ့ကြွင်းနားပါသွားအော်ပြစ်လိုက်တယ် ဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိ ဒီနေ့နဲ့ဆို အဲ့လိုမျိုးသွားအော်
လိုက် တာ ရရက်မြောက်တဲ့နေပါ အော်ပြီးတဲ့နေကစလို့ ဒီနေ့ထိကြွက်ချီးကိုမတွေ့ရတော့ပါဘူး ။။။။။
ဘယ်တွေ့ရတော့မလဲ… အစ်မက လာပြီး ကြွက်တွေအကုန်ရောင်းလိုက်တာပေါ့။ ငါ့ညီမလေး ကြွက်ချေးနဲ့ နပန်းလုံးနေရမှာစိုးလို့လေ…
မမနော်နောက်တာလား ချစ်မမနော် ။။။
စနိုးရေ ကျန်ကျန်ဖန်ဖန်ဘဲပြောရမလား၊ အံအော်တယ်ဘဲပြောရမလား ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတာက စနိုးအော်ရင်းအော်ရင်းနဲ့ ဟစ်ဟော့အဆိုတော်ကြီးဖြစ်လာမှာ သေချာနိုင်တယ်။
“ ကြွက်သေ တစ်ခု ကို အရင်းပြု ” ဆိုတာကိုများ မေ့နေရော့လားကွယ်
“ကြွက်ရောင်းရန်ရှိသည် တကောင် ၁ဝပြား” ဆိုပြီး..
အိမ်ရှင်တွေမေးကြည့်တော့ အဲလိုရေးထားရင် ကြွက်တွေ မလာ ဘူးဆိုဘဲ..
ဒါဆို ကြွက်တွေက စာလဲ တတ်လို့ပေါ့နော်…. ။
တိရိစာ္ဆန်တွေက တကယ်တော့ လူစကား နားမလည်ကြပါဘူး ။ လူတွေရဲ့ အလေ့ကျင့်နဲ့ ပြုမူပုံကို မှတ်ပြီး ၊ ဉာဏ်ရေအလိုက် ပြန်လည်တုံ့ပြန်တတ်တာမျိုးပါ .. လူနဲ့ အနေနီးတဲ့ တိရိစာ္ဆန်က ပိုလို့တောင် အပေးယူမျှတပါသေးတယ် .. … ။ အစ်မကြောင်လေးဆို … အခုဆို အရမ်းနားလည်နေပြီ … ။
မနက်တိုင်း လာလာနှိုးတယ် …….. နှိုးပုံက မျက်နှာနားကပ်ပြီး တညှောင်ညှောင်အော်တာ မျက်စိမဖွင့်မချင်းပါ ။ မဖွင့်ပဲ ပေတေအိပ်ကြည့် ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ မျက်နှာကို သူ့မျက်နှာလေးနဲ့ လာကပ်ပြီးခေါင်းနဲ့ ဝှေ ့ပါတယ် …. ။ အဲ့ဒါတောင်ပေကပ်ပြီး ဆက်အိပ်လျှင် နော်ကဆုံး အဆင့် လက်ဖဝါးပိစိလေးနဲ့ အစ်မမျက်နှာကို လာလာပုတ်တယ် …. ။ အရမ်းအိပ်ချင်နေတဲ့အချိန်ဆို ဒေါသထွက်ပြီး ထဟောက်လိုက်ရင် ဆက်မအော်တော့ပဲ ….. ဒီတိုင်းစိုက်ကြည့်နေတတ်တယ် …. ။ နောက်ရက်တွေ သုံးလေးရက်ထိ .. လာမနှိုးတော့ဘူး …စိတ်ကောက်တာ …. ။ သူ့ကိုပြန်ချော့မော့ပြီး … ပွတ်သပ်လိုက် ချီလိုက်လုပ်တော့မှ ..စိတ်ကောက်ပြေပြီး နောက်နေ့မနက်ပြန်လာနှိုးတာ …. ။ အဲ့ဒါ နားလည်လို့တော့မဟုတ်ဘူး…. အလေ့ကျင့်လုပ်ထားပေးလို့ပါ … အဆင့်ဆင့်နှိုးပုံတွေကတော့ …သူ့အသိရှိသလောက်လေး တိုးတိုးပြီးလုပ်တာပါ … ။ သူနှိုးလို့ ထပြီးရင် သူ့ကို အစာလေး အမြဲထကျွေးတယ် .. ဒါကြောင့်လည်း ..ဒီအလေ့ကျင့်ကို သူက မှတ်မိနေတာပါ ။
လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလေးနှစ်တုန်းက အိမ်မှာ ကြောင်လေးတစ်ကောင်ရှိခဲ့တယ်.. မွေးကင်းစ ဆယ်ရက်သာလောက်လေးကို အစ်မတက်နင်းလို့ ကြောင်လေးက ခေါင်းလေးစောင်းပြီး… ကြောင်ရူးလေးဖြစ်သွားခဲ့ဖူးတယ်..ကိုယ့်ပယောဂကြောင့် ကြောင်လေးဖြစ်တာမို့ တယုတယနဲ့ ကျွေးမွေးနေတုန်း … ၊ တနှစ်ကျော်လောက်ကြာတော့အကောင်းပကတိကနေ … သေပါရော ……အဲ့ဒီအချိန် အဖိုးဖြစ်သူက အသည်းသန်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ …ကြောင်လေးသေပြီး မကြာဘူး .. သူလည်း ပြန်ထူထူထောင်ထောင်ဖြစ်လာခဲ့တယ် ….. ။ သူများတွေပြောတာတော့ ကိုယ့်ကြောင်လေးက ထွက်မပြေးနိုင်လို့ အသေစား အသေခံ ခံလိုက်ရသတဲ့ …….. ။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ ဖြေရှင်းချက် မထုတ်ချင်ပေမယ့် …… ကံပါလောက်သလောက်နေရပြီး ကံကုန်လို့ သေတယ်လို့ပဲ တွေးလိုက်ပါတယ် ……. ။
စနိုးရေ..အဲဒါတွေကလည်း တစ်ခါတစ်လေကျရင် ယုံရတယ်နော်။ မွန်မွန့်နဲ့သိတဲ့အစ်မလည်း အဲဒီလိုကြုံဖူးတယ်။ မေတ္တာပို့ပေးရင် ကိုယ့်ကို အနှောင့်အယှက်မပေးဘူးတဲ့။
မွန်မွန်ကြုံရတာကတော့ ထူးဆန်းတယ်။ လေလာရင် ဓား ပြရတယ်တဲ့။ လေက လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားရောတဲ့။ အဲဒါ နာဂစ်ဖြစ်တော့လေ ဘေးအိမ် ဦးလေးက မွန်မွန်တို့ အိမ်ရှေ့ကနေ ဓားမကြီးကို ကိုင်ပြီး “နာဂစ်ရေ သွားသွား” ဆိုပြီးအော်တာ။ (အဲဒီတုန်းက ရေဒီယိုက နာဂစ်နာမည်နဲ့ မုန်တိုင်းတိုက်မယ်လို့ ကြေညာထားတာ။) အမှန်တကယ်ကို မွန်မွန်တို့အိမ် အမိုးတောင် မလန်သွားဘူး။ တိုက်ဆိုင်တာလား ဘာလားတော့ မသိဘူး။
အဲ.. ။ တယ် ဟုတ်ပါလား..စနိုး…ရ..။
ဘာဘဲ ဖြစ်ဖြစ် သူတို့ ကို မေတ္တာထား လိုက်တော့ ကိုယ့်စိတ် က အရင်ငြိမ်းချမ်းမှု ရသွားတာလဲ အမြတ် ပေါ့ မနှင်းဖြူ လေး ရေ။
နယ်ဖက်တွေမှာတော့ အိမ်ကြွက်တွေနှိမ်နင်းဖို ့ကြောင်မလေးတစ်ကောင်မရှိမဖြစ်ပါ